के तपाईको व्यवसायलाई यी चार कुञ्जी मेट्रिक्स बारे सचेत छ? | Martech Zone
बिहीबार, मे 24, 2007 शनिबार, अगस्ट 4, 2007 Douglas Karr
मैले धेरै नै पहिले एउटा अद्भुत स्थानीय नेतासँग भेट गरे। उनको उद्योगको लागी उसको उत्कटता र अवसरको लागि यो संक्रामक थियो। हामीले सेवा उद्योगका चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौं जहाँ उनको कम्पनीले आफ्नो छाप छोडेको छ।
यो कठिन उद्योग हो। बजेटहरू तंग छन् र काम कहिलेकाँही असुरक्षित महसुस गर्न सक्दछ। जब हामी चुनौति र समाधानहरूको बारेमा छलफल गर्‍यौं, मैले महसुस गरे कि यो key मुख्य रणनीतिहरूमा झरेको छ।
तपाईंको व्यवसायमा निर्भर गर्दै, यी रणनीतिहरूसँग सम्बन्धित मेट्रिक्स परिवर्तन हुनेछ। तपाईंसँग प्रत्येकसँग सम्बन्धित मेट्रिक्स हुनुपर्दछ, यद्यपि। तपाईं सुधार गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं मापन गर्न सक्नुहुन्न!
सन्तुष्टि त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको कम्पनीको लागि दुई गुणा दर्ता गर्दछ। असन्तुष्ट ग्राहकले हामीलाई छोडे पछि हामी सबैले 'ह्वा' सुनेका छौं। तर हामीले प्राय जसो बेवास्ता गर्छौं भन्ने तथ्य यो हो कि उनीहरू आधा दर्जन अन्य मानिसहरूलाई पनि भन्छन तिनीहरू कति असन्तुष्ट थिए। त्यसोभए ... तपाईंले भर्खर ग्राहक हराउनु भएन, तपाईंले थप सम्भाव्यताहरू पनि गुमाउनुभयो। कहिले पनि नबिर्सनुहोस् कि ग्राहकहरू (र कर्मचारीहरू) जसले छोडे जसले असन्तुष्ट छन् अन्य मानिसहरूलाई भन्छन्!
कम्पनी जसले तिनीहरूको सेवा गरिरहेको छ सुन्न सक्दैन, तिनीहरू जाँदै छन् र अरुलाई आफूले जानेका सबैलाई भन्दैछन्। मुख मार्केटि ofको शब्द पर्याप्त कुरा गरिएको कुरा होईन, तर यसले व्यापारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छ - सकारात्मक र नकरात्मक। इन्टर्नेट जस्ता उपकरणहरूले असन्तुष्टि बढाउछन्।
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो ग्राहकहरूको तापमानको स्तर जाँच्दै हुनुहुन्छ र ती सन्तुष्ट छन् (भन्दा बढी)। एक साधारण ईमेल, फोन कल, सर्वेक्षण, आदि फरक फरक गर्न सक्छन्। यदि उनीहरूसँग तपाईंसँग गुनासो गर्ने अवसर छैन भने - तिनीहरू अरू कसैलाई गुनासो गर्ने छन्!
सन्तुष्ट ग्राहकहरु अधिक खर्च र तपाइँ को लागी अधिक ग्राहकहरु को लागी।
रिटेन्सन भनेको तपाईको कम्पनीको ग्राहकहरु लाई तपाईको उत्पादन वा सेवा खरीद गर्न को लागी क्षमता हो।
एक वेबसाइट को लागी, प्रतिधारण कुल अद्वितीय आगन्तुकहरु को प्रतिशत छ जो फर्कदै छन्। एक अखबार को लागी, धारणा घर सदस्यता को नवीकरण को प्रतिशत छ। एक उत्पादको लागि, अवधारणा खरिददारहरूको प्रतिशत हो जुन पहिलो पटक पछि तपाइँको उत्पादन खरीद गर्छन्।
अधिग्रहण नयाँ ग्राहकहरु वा नयाँ उत्पादन च्यानलहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी तपाइँको उत्पादन बेच्न को रणनीति हो। विज्ञापन, मार्केटिंग, रेफरलहरू र माउथको शब्द सबै उप-रणनीतिहरू हुन् जुन तपाईं लिभेरिगेसन गर्न, मापन गर्न, र इनामदायी हुनुपर्दछ।
नबिर्सनुहोस् ... नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न अवस्थित भएकालाई राख्नु भन्दा महँगो छ। छोडेको ठाउँमा नयाँ ग्राहक फेला पार्दा तपाईंको व्यवसाय बढ्दैन! यो केवल बराबरमा फिर्ता ल्याउँछ। के तपाईंलाई थाहा छ नयाँ ग्राहक प्राप्त गर्न कति खर्च हुन्छ?
मुनाफा, पक्कै पनि, तपाईंको सबै खर्च पछि कति पैसा बाँकी छ। यदि तपाईं लाभदायक हुनुहुन्न भने, तपाईं धेरै लामो समय सम्म व्यवसायमा हुनुहुने छैन। नाफाको सीमा भनेको नाफाको अनुपात कति ठूलो हुन्छ ... धेरै व्यक्तिले यसमा धेरै ध्यान दिन्छन् तर कहिलेकाहि गल्तीमा। उदाहरणका लागि वाल मार्टसँग धेरै कम मुनाफा छ तर ती देशका सब भन्दा लाभदायक कम्पनीहरू हुन्।
यी सबैको अपवाद, निस्सन्देह, सरकार हो।
गीक स्केलमा, यसलाई दर्जा दिनुहोस्!
क्यारोलिना घटना योजना
मई 24, 2007 मा 9: 08 PM
अद्भुत पोष्ट! तपाईंको परिप्रेक्ष्य मन पर्यो, विशेष गरी ग्राहक सेवामा। धन्यबाद।
मई 25, 2007 मा 2: 05 PM
केवल चीज जुन सच्चाइको पसल, स्टोर, कम्पनी वा स really्गठनको लागि छुट्याइएको हुन्छ हाम्रो सेवा हो। दुःखको कुरा, धेरै, धेरै कम्पनीहरूले अपेक्षाहरू पूरा गर्नमा पनि छोटो पारिन्छन्, एक्लै छोड्नुहोस्। उत्तम पोष्ट र सेवाको ख्याल राख्ने कुनै पनि कम्पनीको लागि एक नियमित रिमाइन्डर हुनुपर्दछ।
मई 25, 2007 मा 5: 12 PM
उत्कृष्ट पोष्टले यसलाई स्वादिष्टमा बचत गर्न कोशिस गरिरहेको थियो ... तर यसले पुस्तक मार्क गर्दछ… !! महान अवलोकन!
मई 28, 2007 मा 11: 44 एएम
LOL! मलाई यो पोस्टको अन्तमा सरकार उद्धरण मनपर्दछ! यो यति सत्य छ। पार्टीले कुन कार्यक्रम चलाइरहेको छ त्यसले फरक पार्दैन, मानिसहरू क with्ग्रेसप्रति असन्तुष्ट छन्, राष्ट्रपतिबाट असन्तुष्ट छन्, र धेरैले उनीहरुका स्थानीय र काउन्टी सरकारहरुमा पनि।
र तिमीलाई थाहा छ ??? सरकारले प्रत्येक प्रतिनिधिको अवधिमा6महिना मात्र ख्याल राख्छ - पुनः चुनावको बखत!